राजीनामाको चर्काे दबाब परेका बेला के चाहन्छन् प्रधानन्यायाधीश जबरा ? यस्तो छ भित्री योजना - Media Dabali
मंगलवार, मंसिर २१ २०७८Dec 07 2021
'गाई'को आडमा कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा ९० करोडमा बेचेको खुलासा
कांग्रेस महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने यी हुन् कांग्रेसका लडाकुहरु
कांग्रेस बाग्मती प्रदेशको पदाधिकारीमा यी हुन् जित्ने नेता
गुरुराज घिमिरे र भूपेन्दजंग शाहीको हारले कांग्रेसमा युवा नेतृत्व अझै कठिन
कमल थापाले नयाँ पार्टी खोल्ने, गणतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको नारा बोक्ने
प्रदेश १ सभापतिको निर्वाचनमा शेखर र सुजाताले भोट नहाल्दा चिप्लिए गुरुराज घिमिरे
प्रदेश २ को अधिवेशन स्थगित, निधिलाई संकट
कांग्रेसका लोकप्रिय युवा नेता खतिवडाले गरे केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
ताइवान स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने कर्पोरेट समर्थकहरुमाथि चीनको आँखा
राजीनामाको चर्काे दबाब परेका बेला के चाहन्छन् प्रधानन्यायाधीश जबरा ? यस्तो छ भित्री योजना
काठमाडौं – अनेक विवादमा परेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि यतिबेला राजीनामाको चर्काे दबाब परेको छ । तर उनी राजीनामा माग्दैमा राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।
अर्काेतिर अदालतकै अधिकांश न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत संघसंगठनले राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन नै गर्न थालिसकेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा आईतबारदेखि वकिलहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
तर सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको नयाँ कार्ड फालेका छन् । जबराको प्रस्तावमा न्यायाधीशहरू सहमत भएमा राजीनामाको दबाब मत्थर हुनेछ र जबराकै प्रस्ताव अनुसार न्यायाधीशहरू अगाडि बढ्नेछन् ।
आईतबार भएको न्यायाधीशहरूको भेलामा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक निकासको अपेक्षा गरेको प्रस्ताव सुनाएका छन् । जबराले केही समय प्रधानन्यायाधीशमै रहने र माहोल शान्त भएपछि राजीनामा दिने प्रस्ताव राखेका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे विस्तृत बुझ्न न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपनाप्रधान मल्ल र शर्मालाई वार्ताका लागि पठाउने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा २०७९ मंसिर २७ गतेका दिन ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने देखिन्छ । तर उनी चालू वर्षभरि प्रधानन्यायाधीश रहने र २०७९ लागेपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेका स्रोतले जनाएको छ । जबराको यो प्रस्तावमा न्यायाधीशहरू सहमत भएमा सर्वाेच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरू बीचको विवाद अन्त्य हुने देखिएको छ ।
चोलेन्द्र र रञ्जन कौडा खेल्ने साथी, यसरी हुन्थ्यो खेलबाड !
सर्वोच्चमा कोरोना, सवारी चालकमा पुष्टि
भोलि देशभरका अदालत बन्द हुने, किन गरियाे अचानक निर्णय ?
ओली सरकारले गरेको दलाल पोस्ने निर्णय सर्वाेच्चद्धारा खारेज !
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि आज सुनुवाइ, ओलीलाई आपत् होला कि राहत ?
सर्वोच्चले सधैं महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा किन चाँडो टुंग्याउँदैन ?
शुक्रवार, माघ २ २०७७१०:१५:२८
बाग्मती कांग्रेसमा ७०० मत गन्दा कसले कति मत ल्याए ?
एमाले उपाध्यक्षको चुनावमा बादल र घनश्याम भुसालको कति–कति मत ?
एमालेको मतदान सकिएर मतपरिणाम नआउँदै भीम रावल खुसी, यस्तो छ भित्री रहस्य !
कांग्रेस चुनावमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पक्षका कति–कति जिल्ला सभापति ? (सूचीसहित)
अपडेट: कांग्रेस गण्डकीमा कडा प्रतिस्पर्धा, कसले कति मत पाए ?
बागमती प्रदेशमा १००७ मत गणनाको ताजा परिणाम बाहिरियो, इन्द्र बानियाँ कति अगाडि ?
गण्डकी कांग्रेसमा मत परिणाम नसकिदै शर्मा बिजयी हुने निश्चित
Copyright © 2021 All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend